‘बैजनाथलाई रेडजोनमा पुग्न नदिन प्रयत्नशिल छौँ’ – Mission
‘बैजनाथलाई रेडजोनमा पुग्न नदिन प्रयत्नशिल छौँ’
बाँके कोरोना संक्रमणको रेडजोनमा रहेको जिल्ला मध्ये एक हो । यहाँ दैनिक मृत्युदर र संक्रमणदर उच्च रहेको जिल्ला पनि भएको छ । अहिले सम्म बाँकेमा १४ हजारको हाराहारीमा कोरोना संक्रमित छन् । मृत्यु हुनेको संख्या करिब २ सय पुगेको छ ।बाँकेका आठ स्थानीय तह मध्ये बैजनाथ गाउँपालिका पनि गाउँपालिका हो । यहाँका अहिलेसम्म १८ जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् । साढे एक सय जना संक्रमित सक्रिय छन् । बाँकेमा कोरोनाका कारण कम प्रभावित भएका पालिका मध्ये एक हो ।जहाँको अन्य पालिकाहरुको तुलनामा नागरिक संक्रमित कम छन् ।तर जिल्लाभर तीव्र रुपमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेकोले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइएको छ ।गाउँपालिकाका आठ वटै वडामा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्नुका साथै कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा रहेका छन् । यस्तै स्थानीयहरुलाई समेत कोरोनाका बारेमा सचेतना प्रदान गरिरहेको छ । बाँकेमा कोरोना महामारी फैलिरहेको अवस्थामा बैजनाथ गाउँपालिकामा संक्रमणको अवस्था, रोकथामका लागि भइरहेका प्रयास र समस्या समाधानको लागि गाउँपालिकाले खेलिरहेको भूमिकाका विषयमा बैजनाथ गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख लक्ष्मण शाहीसँग मिसन टुडे दैनिकका शुभाकर विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
१. बैजनाथ गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमणको अवस्था के छ ?
बाँके जिल्लामा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह छ । जिल्लामा अहिले लकडाउन गरिएको छ । आगामी जेष्ठ ३ गतेसम्म लकडाउन गरिरहेको अवस्था छ । स्वाभाविक रुपमा बैजनाथ गाउँपालिका पनि कोरोना संक्रमणको अवस्था फैलदो क्रममा छ ।अहिले बैजनाथ गाउँपालिकाको होम आइसोलेसनमा ५६ जना महिला र पुरुष ८५ जना जना कुल १ सय ४१ जना रहेका छन् । प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यचौकीका प्रमुखहरुलाई फोकल पर्सनका रुपमा परिचालित गरिएको छ । उनीहरुले होम आइसोलेसनमा रहेकाहरुलाई परामर्श दिने काम गर्छन् । उपचारको लागि सल्लाह गर्ने र डिस्चार्ज गर्ने गर्दछन् । यस्तै कोरोना संक्रमितहरुलाई उपचारहरुमा केन्द्रीत छौ ।
२. बैजनाथमा कोरोना संक्रमणको कुन तहमा रहेको छ ?
विश्वभर कोरोनाको दोस्रो महामारी छ । हाम्रो छिमेकी देश भारत त झन कोरोनाबाट निकै आक्रान्त भएको छ । त्यसको प्रभाव हाम्रो देशमा पनि परेको सबैलाई थाहा छ ।देशले अभूतपूर्व महामारीको सामना गरिरहेको छ । भारतसँग सीमा जोडिएको बाँके जिल्ला पनि कोरोना संक्रमणको रेडजोनमा रहेको छ । एक महिनायता लकडाउन छ । कोरोनाको संक्रमण र मृत्युदर डरलाग्दो अवस्थामा फैलिएको छ । जिल्लाभर रेडजोनमा छ । तर स्थानीय तहहरु मध्ये बैजनाथ गाउँपालिका रेडजोनमा छैन । तर कोरोना भने फैलिरहेको छ । मृत्युदर भने निकै कम छ । हामी मृत्युदर कम गर्नको लागि प्रयत्नशिल छौँ । कोभिड अस्पताल निर्माण गरेका छौ । यस्तै कोरोनाका लक्षण देखिएकाहरुलाई आकस्मिक सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । चार बेडको आकस्मिक बेड अस्पताल सञ्चालन रहेको छ । अहिलेसम्म धेरैले सेवा लिइरहेका छन् । यस्तै पीसीआर पोजेटिभ भएकाहरुलाई राख्नको लागि आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ । यस्तै त्यहाँ अक्सिजनको पनि सुविधा रहेको छ । त्यहाँ ११ जना संक्रमित उपचाररत छन् ।
३. गाउँपालिका स्तरीय स्वास्थ्य शाखाले नागरिकहरुको सुविधाका लागि अहिलेसम्म के के काम गरेको छ नी ?
बैैजनाथ गाउँपालिकामा आठ वटा वडा रहेका छन् । प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था समेत रहेका छन् । महामारीको समयमा त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हामीले उच्च मनोबलका साथ परिचालित गरेको अवस्था छ । उनीहरुलाई २४ घण्टा परिचालित गरेका छौ । यस्तै त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुको सहयोगमा कोरोना संक्रमितहरुलाई स्वास्थ्य केन्द्रसम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाएका छौ । त्यहाँ उपचार हुन नसकेकाहरुलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा रिफर गर्ने गरिएको छ । गाउँपालिकाबाट सिधै भेरी अस्पताल र कोहलपुर मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा लिने गरिएको छ । यस्तै कोरोना सम्बन्धि बच्ने उपाय अपनाएका छौ । स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो पनि गरिरहेको अवस्था छ । जनताको चेतनाको लागि महिला स्वास्थ्यस्ंवयम सेविकाको समेत परिचालन गरिएको छ । जिंगल मार्फत पनि हामीले गाउँगाउँमा जनचेतना फैलाएका छौ । जनप्रतिनिधि ज्यूहरु समेत दैनिक रुपमा जनतालाई सूचना प्रवाह गर्दै सचेतना फैलाउन सक्रिय हुनु भएको छ । २० बेडको आइसोलेसन रहेको छ । होम आइसोलेसन सेवा प्रदान भइरहेको छ । पूर्व तयारीका रुपमा हामीले अक्सिजन स्टक राख्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जतिबेला पनि सेवामा खटिने गरी तयारी अवस्थामा राखेको कुरा हो ।
४. कोरोना संक्रमण लामो समयसम्म रहने स्थिति देखिन्छ यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाको आफ्नै स्रोत र साधनले कोरोना रोकथामका लागि सम्भव छ ?
अहिले नै कोरोना महामारी विरुद्ध लड्नको लागि गाउँपालिकामा स्रोत साधन अभाव भइसकेको अवस्था भने सिर्जना भइसकेको छैन् । तर जिल्लाको अवस्था हेर्दा बैजनाथ गाउँपालिका पनि प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ । त्यसको पूर्वतयारीमा हामी छौ । अहिले सम्म गाउँपालिकाकै स्रोत र साधनले काम गरिरहेको अवस्था हो । स्थानीय सरकारले सबै कुरा व्यवस्थापन गरिरहेको छ । गाउँपालिकामा कार्यरत आइएनजिओहरुले गाउँपालिकालाई सहयोग गर्नको लागि आफूहरु तयारी अवस्था रहेको बताएका छन् । गाउँपालिकाले आफूहरुलाई सहयोग माग्यो भने दिन तयार छौँ भनिररहेको छ । यहाँहरुको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको यो यात्रामा सहयात्रा गर्न खोजिरहनु भएको छ । त्यसको लागि स्वभाविक रुपमा गाउँपालिकाले सबैसँग सहयात्रा गर्न तयार छ ।पीपीई सेट, स्यानीटाइजर, पञ्जा तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरु अभाव अभाव देखिएको थियो । तर गाउँपालिकाले विभिन्न स्थानबाट व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ । अहिले सम्म हामीसँग कुनै पनि कुराको अभाव देखिएको छैन । स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको अवस्था छ । यो अवस्था लामो समय रहेको अवस्थामा पक्कै पनि हामी स्रोत साधनको अभावको मार खेप्न सक्ने सम्भावना चाही छ । बाँके जिल्ला कोरोना संक्रमणको रेडजोनमा रहेकोले यो अवस्था अलि परैसम्म धकेलिन सक्छ । त्यसो अवस्थामा गाउँपालिकाले सहयोग हातहरुको अपेक्षा गर्ने नै भयो । त्यसो भयो भने हामी प्रदेश सरकार र केन्द्र सँग माग गर्ने नै छौ । तर अहिलेसम्म अक्सिजनको बढी समस्या देखिएकोले अपुग हुने सम्भावना रहेको छ । किन भने यसपटक बिरामीहरु कोरोनाको पूर्ण लक्षण सहितका आइरहेका छन् । अक्सिजनको मात्रा कम हुने र श्वास फेर्न समस्या हुने गरेको छ । त्यसैले हामीसँग अक्सिजन स्टक रहन जरुरी देखिन्छ । त्यसको लागि प्रदेशसँग माग गरिसकेको अवस्था छ ।
५. अहिले पनि जिल्लाभर निषेधाज्ञाको अवस्था छ , नागरिक यसबारे कत्तिको सचेत भएको पाउनु भएको छ ?
निश्चित रुपमा सरकारले यसबारे मापदण्ड तोकेको छ । नगर तथा गाउँपालिकामा निश्चित कोरोना संक्रमितको संख्या पुग्यो भने निषेधाज्ञा लगाउने भनेर । त्यसो भएकोले हुनाले बैजनाथ गाउँपालिकामा १ सय ४१ जना सक्रिय संक्रमित छन् । जिल्लाभरी नै निषेधाज्ञा लागू गरिएको हुनाले यहाँ पनि लागु हुने नै भयो । तर गाउँघरमा विभिन्न काम तथा बालीनाली लगाउने भएकोले सहर क्षेत्र भन्दा अलि कमै लागू भएको छ । उहाँहरुले नियम उल्लंघन नै गरेको अवस्था भने होइन । समग्रमा भन्दा नागरिकहरुले निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना भएको हामीले देखेका छौ गत वर्षहरुको जस्तो अवस्था अहिले छैन ।मानिसहरुले धेरै कुरा बुझिसकेका छन् । अहिले सरसर्ती हेर्दा गाउँपालिकामा साना बालबालिका देखि बुद्धबृद्धाहरु पनि घरबाहिर निस्कदाँ मास्क लगाएको देखिन्छ । त्यसैले नागरिकमा कोरोना विरुद्ध लड्नको लागि सचेतना आइसकेको मैले महशुस गरेको छु । हाम्रो गाउँपालिकामा संक्रमणको अवस्था ०. २ मात्रै छ ।
६. महामारी विरुद्ध फ्रन्टलाइनरको रुपमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि गाउँपालिकाले केही विशेष सुविधा दिएको छ ?
अहिलेसम्म बैजनाथ गाउँपालिकामा स्वास्थ्यकर्मी माथि हातपात, कुटपिट भएको छैन । यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरुको उच्च मनोबलका साथ फिल्डमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुको कोरोना महामारीको यो युद्धमा सरिक हुनुहुन्छ । दैनिक रुपमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई म धन्यावाद दिन चाहन्छु । कोरोना संक्रमितको सौहार्द पूर्ण वातावरणमा उपचार भइरहेको छ । यसमा म तपाईंलाई जोखिम भत्ताको बारेमा केही जानकारी गराउन चाहन्छु । विगतका वर्षहरुमा हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि भनेर केन्द्रीय सरकारसँग माग गरेका थियौ । त्यो पैसा अर्थ मन्त्रालयले निकास दिएन ।केन्द्रले प्रदान गरेन । त्यसपछि स्थानीय सरकारले क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आफ्नो निर्णय अनुसार आर्थिक सुविधा प्रदान गरेको थियो । सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यो सुविधा दिइएको छैन, थिएन । विदामा बसेकाहरुलाइए त्यो सुविधा प्रदान गरिदैन । महामारीको समयमा जो फिल्डमा सक्रिय रुपमा खटिन्छ । उसलाई मात्रै यो सुविधा प्रदान गरिएको हो । यसपटक पनि हामीले महामारी विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएकाहरुलाई भत्ता दिने निर्णय गर्दैछौ । कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेपछि वितरण हुन्छ ।
७. अन्त्यमा, सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई कोरोनाबाट सुरक्षित रहनको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ ?
म सम्पूर्ण बैजनाथबासी आमा,बुबा,दाजुभाई, दिदिबहिनीहरुलाई सुरक्षित रहन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु । यो विषय परिस्थितिमा आफू सुरक्षित हुनु र अरुलाई सुरक्षित हुन सहयोग गर्नु हाम्रो दायित्व हो । त्यसैले सबैलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट निषेधाज्ञाको पालना गर्न पनि आग्रह गर्दछु । समुदायस्तरमा कोरोना फैलिसकेकोले अत्यावश्यक नपरी बाहिर ननिस्कयौँ । आफू जहाँ जसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ, त्यहीँ बस्नुस् । बाहिर निस्कनु पर्दा अनिवार्य मास्क लगाउ । स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरौँ । सबैले कोरोना रोकथामका लागि सहयोग गरौँ ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, बैशाख २९, २०७८ 1:05:51 PM |
Posted in अन्तर्वार्ता, प्रदेश नं. ५, मुख्य समाचार, समसामयिक, समाचार
Prevकोरोना कहर : बाँकेमा १३ घण्टाको अवधिमा ११ जना संक्रमितको मृत्‍यु
Nextसगरमाथामा दुई जना आरोहीको ज्यान गयो